Izikolo ezintsha zeGeekbench 5 Pro kusuka ekuhlolweni kwe-Mac mini ARM | Ngivela kwa-mac
Izikolo ezintsha zeGeekbench 5 Pro zeMac mini ARM Test
Sekuphele isikhathi esingaphezu kwenyanga kusukela UCraig Federighi wethule i-chupinazo yephrojekthi ye-Apple Silicon. Maningi amahemuhemu okuthi i-Apple izokwethula lolu shintsho ku-WWDC 2020, kepha okungekho noyedwa owacabangayo ukuthi ibivele ithuthuke kakhulu.
Izinsuku eziyishumi kuphela ngemuva kokwethulwa kwayo, amaKitshi Esikhashana Wokuqala Wonjiniyela asevele athunyelwe, afaka i-Mac mini ARM yokuhlola kanye nesoftware yayo ehambisanayo ukuze abanye onjiniyela abanelungelo bavele baqale "ukudlala" ngeyokuqala I-Apple Silicon (uhlobo lokuhlola) lwenkathi entsha. Futhi yize i-Apple ikuvimbile, imiphumela yokuqala yokuhlolwa kweGeekbench 5 Pro seyivele isebenza.
Yize i-Apple ivimbele abanikazi be- Inguquko Yezinguquko I-Apple Silicon ishicilela idatha yokusebenza ye-Mac mini, futhi imiphumela yesibili yeGeekbench seyivele isebenza kumanethiwekhi omphakathi. Kunjengokungathi unika izingane zakho idrone bese uzivimbela ukuthi zizame ngaphakathi endlini. Akunakwenzeka.
Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuthi onjiniyela abanenhlanhla bathole ifayela le- I-Mac mini ARM Ukuqala ukusebenza ngayo, izivivinyo zokuqala zeGeekbench zale yunithi yokuhlola sezivele. Kepha le miphumela itholwe ngohlelo lweGeekbench olusebenza ngaphansi kweRosetta 2, futhi noma ngabe i-Apple isho kangakanani, kuseseyi-emulator ebonakalayo ngakho-ke kunciphisa ukusebenza kwanoma iyiphi isoftware.
Imininingwane ye IGeekbech 5 Pro okushicilelwe namuhla kungokoqobo, ngoba lolu hlelo lusetshenziswe ngokwendabuko kwi-Mac mini, ngaphandle kweRosetta phakathi. Kungenzeka ukukwenza ngokuqala kabusha, ukukhubaza imisebenzi yezokuphepha nokusayina kwekhodi yezinhlelo zokusebenza.
IMac mini ARM idlula iMacBook Air kuGeekbench
IGeekbench yale khithi inhle kakhulu uma ubheka ukuthi iyisibonelo esineprosesa ye-iPad Pro.
IGeekbench ikhombisa umphumela we 1098 amaphuzu womgogodla owodwa futhi 4555 amaphuzu kumodi ye-multicore. Idatha eshicilelwe phambilini egijimisa iGeekbench ngaphansi kweRosetta yayinamaphoyinti angama-800 kumgogodla owodwa nama-2600 anezinhlamvu eziningi ngasikhathi sinye.
Ngalesi silinganiso, i-Mac mini ARM ingaphezulu kwe- 2020 iMacBook Air, ethola imiphumela yamaphuzu ayi-1005 kumgogodla owodwa namaphuzu angama-2000 acubungula ama-cores amaningi ngasikhathi sinye.
Imininingwane ihle impela, uma sibheka ukuthi iyi-Mac mini yokuhlola, neprosesa ye-iPad Pro yamanje, i- I-A12Z Bionic. Kungenzeka ukuthi i-Apple Silicon yokuqala ezomakethwa isivele izofaka iprosesa entsha ethuthuke kakhulu kunale futhi ilungiselelwe iMacOS Big Sur.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » Izikolo ezintsha zeGeekbench 5 Pro zeMac mini ARM Test
Fihla izithonjana zedeskithophu yakho ngokushesha nge-Desktop Ghost Pro
Izintambo ze-iMac Pro zizofana nalezi ze-iPhone 12